Dhismaha Garoonka Diyaaradaha Garowe oo la Bilaabayo Bisha Danbe – Radio Daljir
Dhismaha Garoonka Diyaaradaha Garowe oo la Bilaabayo Bisha Danbe
Diseembar 16, 2015 4:34 b 0
Somalia, December 16, 2015-(Daljir)_Maanta magaalada Garowe soo gaaray baabuur wada qalabkii lagu dhisi lahaa Garoonka diyaaradaha ee Garowe.
Baabuur waaweyn oo ah kuwa qaaday xamuulka ayaa maanta bosaso kasoo qaadat qalab lagu dhisayo Garoonka Garowe oo lafilayo in dhismihiisa la bilaabo bilowga sanadka Cusub.
Dhismaha Garoonka ayaa waxaa ku guulaysatay shiragd laga leeyahay dalka Turkiga,dhaqaalaha ki baxaya waxaa bixinaysa dalka Kuwait.
Waxaa la joojiyey shaqadii Garoonka Garowe oo hada waxay diyaaraduhu ka duulaan kana soo dagaan garoonkii hore ee Garowe ee Kanooku oo wasaaradda duulista hawada ay sheegtay in halkaas ay shaqadu ka socon doonto.
RUUSHKA: Suuriya waxaa ka dhacaya Isbedel Siyaasadeed – Duqeymahana waan sii wadaynaa